Muxuu salka kuhayaa dagaalka xukuumada DDS kuhayso ONLF” warbixin rasmiya. | ogaden24
Muxuu salka kuhayaa dagaalka xukuumada DDS kuhayso ONLF” warbixin rasmiya.
Mar 17, 2019 - Aragtiyood
Waxaa maalmahan soo Ifbaxay dagaal Qaawan oo in muda ah xukuumada madaxwayne Mustafe Muxumed Cumar ay kuhaysay, Hogaanka sare ee Jabhada ONLF iyo Guud ahaan Taageerayaasha Jabhada.
In kaste oo madaxwayne Mustaf uu mar kaste sheego inuu ku Faraxsan yahay Heshiiska dhex-maray Jabhada iyo dawlada Itobiya, hadana waxaa Hadaladaasi Garab socday Ficilo Qaab daran oo Lidi ku ah dhaq-dhaqaaqa iyo Hawlaha Jabhadu Gudaha Ogadenia kawado.
Madaxda Jabhada oo uu ugu Horeeyo Gudomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cismaan waxaa u Qorshaysteen, kadib markii ay Gudaha dalka Galeen inay Guud ahaan Gobolada dalka socdaal kumaraan, iyaga oo kabilaabaya magalada Diridhaba arintaasi ma farax Galinin madaxda mamulka, waxayna u dhigeen caqabado kala duwan iyaga oo kudoodaya inaysan masuul ka ahayn Amaanka madaxda, taasina waxay dib u dhigtay socdaalka iyo booqashadii Gudomiyaha JWXO iyo Wafdigiisa ilaa markii dambe madaxdu isku Tashadeen si iskood ahna Hawshoodii u Guda Galeen.
Kadib kasoo Noqoshadii Diridhaba madaxda JWXO oo uu ugu Horeeyo Gudomiyuhu waxay madaxwaynaha ka dalbadeen Gaadiid 20-Gaadhi ah iyo ciidan Amaanka ilaaliya, si ay dhamaan Gobolada dalka usoo maraan ulana soo Kulmaan shacabka deegaanka ee sugaya, madaxwayne Mustaf dalabkaasi wuu soo dhoweeyay wuuna Aqbalay balse xaalku manoqon sidii Lafilayay oo madaxwaynuhu wuxuu bilaabay caga Jiid iyo balamo aan dhamaad lahayn oo wax kasoconayaa aysan Jirin.
Hadaba mudo dheer oo sugitaan ah kadib madaxda JWXO waxay Go’aansadeen inay isku Tashadaan oo intaasi kabadan aysan sii sugin, waxayna Guda Galeen arimaha safarkooda booqashada Gobolada dalka kaliyana waxaa madaxwaynaha ay kadalbadeen inuu siiyo ciidan ilaaliya Amaanka madaxda Jabhada, madaxwayne Mustaf dalabkaasi si cad ayuu u diiday waxayna taasi keentay in madaxda Jabhadu u dhaqaaqaan Gobolada iyaga oo bilaa ciidan ah.
Waxayna Wafdiga JWXO 12-kii bishan bilaabeen safarka Hayaanka Guusha oo ay kabilaabeen magalada Fiiq ee xarunta Gobolka Erereed, Halkaasi oo markii ay tageen wafdiga laxakameeyay adeega Internetka si ugu Yaraan loo Yareeyo lasocodka bulshada ee safarka madaxda JWXO iyo Kulamada ay bulshada Layeelanayaan.
Kadib Fiiq madaxda JWXO waxay u dhaqaaqeen dhinaca Gobolka Nogob iyaga oo ku Hormaray degmada Sagag oo ay uga sii Gudbeen degmada Dhuxun, meel kaste oo ay tagaan iyo Tuulooyinka ay marayaan madaxda JWXO waxaa si Kal iyo Laab ah oo aan kala Hadh lahayn Jidadka ugu safnaa oo u soo dhowaynayay Qaybaha kala duwan ee bulshada oo aan u kala Hadhin.
Hadaba subaxnimadii shalay oo shacabka degmada Dhuxun iyo madaxda JWXO kulan dadwayne isugu Yimaadeen, ayay mamulka degmada oo adeegsanaya ciidanka Policeka iyo maleeshiyada degmada waxay iskudayeen inay Joojiyaan shirka dadwayne ee madaxda JWXO iyo shacabka, waxaana iskudaygaasi kadhashay Rabshad dhex-martay shacabka iyo mamulka degmada, Halkaasna waxaa dhaawac kasoo Gaadhay 3-muwaadin oo midi yahay xubin Golaha dhexe ee JWXO katirsan.
Maxaa sal u ah dagaalka xukuumada ?.
Marka aynu ka imaano xog-warankaasi Guud ee Kooban oo wax badan aanaa kusoo bandhigin ayaa waxaa muhiim ah inaan uga Gudubno xaqiiqada waxa uu kusalaysan yahay dagaalka xukuumadu kuhayso Jabhada iyo Taageerayaasheeda kaasi oo ah mid muuqda iyo mid dahsoon oo durba shacabka aysan Fahmi karin.
Sida laga wada dharagsan yahay shacabka Somaaliyeed ee kudhaqan wadanka Ogadenia 90% waxay Taageersan yihiin Jabhada ONLF, Taageeradaasi ma’aha mid Qarsoon ee waa mid banaanka Taala oo 11-ka Gobol iyo magalada Diridhaba ba shacabku si buuxda ayay Taageeradooda Jabhada banaanka ula Taagan yihiin.
Dhinaca kale shacabku waxay sida Candhuufta u Tufeen xisbiga Faasidka ah ee Haya Talada deegaanka kaasi oo ah kii loo adeegsaday xasuuqii Arxandarada ahaa ee shacabka lagu Hayay 27-kii sano ee Lasoo dhaafay, kaasi oo kaaga sii darane dhulkii ugu balaadhnaa ee Somaaliyeed ku kala wareejiyay Qomiyadaha Oromada iyo Canfarta, xisbigan magaca Somaalida wata ayaysan Jirin dhib mooyee wax dheef ah oo Guud ahaan shacabka Somaalidu ay kadhaxleen.
Hadaba xukuumada madaxwayne Mustaf oo Og-soon xaqiiqdaasi banaanka Taala ayaa u aragtay sida ugu macquulsan ee looga Hortagi karo ONLF inay tahay in la curyaamiyo dhamaan dhaq-dhaqaaqyada Ururka iyo Hawlihiisa Gudaha, waxaynuna lasoconaa in degmoyin dhawr ah oo ay kamid yihiin Salaxaad iyo Lag-Hida in Hawl wadeenadii Jabhada lagu dhibaateeyay layskuna dayay in laga Hor istaago Hawlahooda shaqo.
Inta badan degmoyinka wadanka Ogadenia mamulada kajira waxay si cad u colaadiyaan Hawl wadeenada Jabhada meelaha Qaarna waxaa kadhacday dhibaato sida degmoyinka Haarcad iyo Birqod, Talaaboyinkaasina ma’aha kuwa u Gaara mamulada degmada ee waa Qorshe Taxan ilaa iyo Heer deegaan, Jabhaduna ilaa xad waxay muujisay samir iyo dulqaad iyada oo kala hadlaysay Kolba cida ay khusayso.
Isku soo wada duube dagaalka xukuumada madaxwayne Mustafe ma’aha mid Qarsoon ee waa mid ay is leedahay ku difaaco Taageerada shacabka DDS ee aysan Haysanin, waxaana Hubaala in xukuumadu kadharagsan Halka Taageerada shacabku Jirto iyo inaysan shacabka deegaanku wax wanaag ah u Hayn xisbiga wixii la Ogaa u Gaystay, sidaa darteed madaxwayne Mustaf iyo Kooxdiisa waxaa la Gudboon inay xaqiiqda wajahaan oo arinka si kale u dhigaan, waayo ONLF xag-xagasho waxba looga Qaadi maayo lagamana Yaabo xataa Haday Kumanaan xitaa dhimanayaan inay Joojiso dadaalkeeda iyo dar-dar Galinta Hawlaheeda shacabku ku daaban yahay.